I-Pluto: UkuQaphela ukuQala kokuQala
Njengoko i- New Horizons mission yahamba ngeplanethi encinane iPluto ngoJulayi 14, 2015, ukuqokelela imifanekiso kunye nedatha yeplanethi kunye neenyanga zayo, isahluko esimangalisayo ekuphenyweni kweplanethi yaqala ukubonakala. I-flyby yangempela yenzeke kusasa ekuseni ngoJulayi 14, kwaye umqondiso ovela kwi- New Horizons uxela iqela layo ukuba bonke bahamba kakuhle eMhlabeni ngo-8: 53 ebusuku ngalobo busuku. Imifanekiso yaxelela ibali abantu ababekade balindile kangangeminyaka engama-25.
Iikhamera ze-spacecraft zityhila umhlaba kulo mhlaba onqabileyo ongeke walindelwa. Inemikharenti kwezinye iindawo, iziqithi ezinqabileyo kwabanye. Kukho iindawo ezikhethiweyo, indawo ezimnyama kunye ezikhanyayo, kunye nemimandla eya kuthatha uhlalutyo olululo olunzulu lwenzululwazi ukuchaza. Iingcali zenzululwazi zisacacisa ukuqonda ubuncwane bezenzululwazi abaye bazifumanisa e-Pluto. Kuthatha iinyanga ezili-16 kuzo zonke iinkcukacha ukuba zibuyisele emhlabeni; Iimpawu zokugqibela kunye nee -tes zafika ngasekupheleni kukaOktobha 2016.
Iinjongo zesayensi zifumene ihlabathi elinemihlaba eyahlukileyo. I-Pluto igqitywe yiqhwa edibeneyo kwiindawo ezininzi ngezinto ezibizwa ngokuba yi "tholins". Ziyadalwa xa ukhanyiso lwe-ultraviolet ukusuka kwiLanga elikude lumnyama. Ummandla wePluto ubonakala uhlanganiswe neqhwa elitsha, elincinci kwiindawo eziqhakazileyo, kunye neekristi kunye nokuqhekeka kwexesha elide. I-Pluto nayo inezintaba zeentaba kunye nemigangatho, ezinye ziphakamileyo njengalezo ezifumaneka kwiiRyyy Mountain e-United States.
Ngoku kubonakala ukuba iCluto inehlobo oluthile lokushushumbisa ngaphantsi komhlaba, olupaka izingxenye zomhlaba kwaye lugxobhoze iintaba phezulu kwabanye. Enye inkcazo ifanisa intambo kaPluto kwisiqhumane esikhulu "sesibane se-lava".
Ummandla weCron, inkulu inyanga yePluto ibonakala ibinombumba obomvu obomvu, mhlawumbi uboshwe nge-tholins eziye zabalekela kwiPluto kwaye zafakwa apho.
Iinjongo zesayensi zesazi zihamba kwi-flyby leyo i-Pluto inemoya, kwaye inqwelo-moya "yabuyisela emuva" kwiPluto emva kokuba idlulile, isebenzisa ukukhanya kwelanga ephuma emoyeni ukuyihlola. Le datha ixelela ulwazi oluchanekileyo malunga negesi zamagumbi emoyeni, kunye nokuxinwa kwayo (oko kukuthi, i-atmospheric thick) ibe yintoni na yegesi nganye. Bajonge kakhulu kwi-nitrojeni, esaphononayo kwiplanethi ukuza. Ngandlela-thile, loo moya ithathelwa endaweni yodlula ixesha, mhlawumbi ngeegesi eziphuma ngaphantsi kwePluto.
Iinjongo zathatha ingqalelo ngokujonge kwiinyanga zePluto, kuquka neCharron kunye nombala wayo ompunga kunye nomnyama. Idata esuka kwisixhobo sokubakho siya kubanceda ukuba baqonde ukuba ziphi izinto ezinqamlekileyo eziphezulu, kwaye kutheni kubonakala ngathi lizwe eliqhoqhile elincinci lento yangaphakathi eyenziwa yiPluto. Ezinye iinyanga zincinci, zenziwe ngendlela engaqhelekanga kwaye zihamba kwiintambo ezinzima kunye nePluto kunye neCron.
Idata esuka eNew Horizons iye yafika emva kweenyanga ezili-16 zokubuya emva komgama omkhulu phakathi kwePluto kunye noMhlaba. Isizathu sokuba kuthathe ixesha elide ukuba ulwazi lwe-flyby lufike apha kukuba kukho idatha eninzi emele ithunyelwe.
Ukudluliselwa kwee-1,000 bits ngeesibini kwiiyure ezili-3 ezigidi zamanqanaba.
Idatha ichazwe ngokuthi "i-trove" yolwazi malunga ne- Kuiper Belt , indawo yesimo selanga apho i-Pluto ihamba khona. Kukho imibuzo eninzi ehlala iphendulwa malunga nePluto, equka "Yayiphi na indawo?" "Ukuba ayizange ifake apho ikhona khona njengamanje, ifike njani na?" Kunye "Iphi i-Charon (inyanga yayo enkulu) zivela, kwaye zenze njani enye inyanga ezine? "
Abantu bachitha iminyaka engaphezu kwe-85 bazi iPluto kuphela njengendawo ekude yokukhanya. IiNew Horizons zazibonakalisa nje njengehlabathi elithakazelisayo, elikhutheleyo kwaye lalitshisa wonke umntu ukuba afune ngakumbi! Heck, mhlawumbi ayikho iplanethi engamanzi!
Ihlabathi Elilandelayo likujonga
Kukho okuza kuza, ngakumbi xa i- New Horizons ityelela enye into ye-Kuiper Belt ekuqaleni kuka-2019.
Into e-2014 MU 69 ihamba kunye nomzila wendlela yokuphuma kwindlela yelanga. Kuya kutshatyalaliswa ngoJanuwari 1, 2019. Hlala uqwalasela!
Undala kangakanani iNkanyezi?
Hlola i-Aldebaran, i-Eye Orange-Red Red Eye ye-Starry Bull
Hlola i-Galaxy Andromeda
Ukujongana ne-Planet Nursery usebenzisa i-Radio Wave
Ziziphi iiNkanyezi ezinkulu kunazo zonke ezisezulwini?
Imbali yeMculo yabantwana - i-1940 neye-1950
St Matthias umpostile, uPatron Saint wezoTywala
Ukwabiwa kweeNgesi zesiNgesi
Okokugqoka kwi-Skating Skating